इरान युद्धबाट पछि हट्याे, यो विश्वकै लागि खुसीको कुरा हो : अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प « News24 : Premium News Channel
इरान युद्धबाट पछि हट्याे, यो विश्वकै लागि खुसीको कुरा हो : अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प
काठमाडाैं, २४ पुस । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड डोनाल्ड ट्रम्पले इरान युद्धबाट पछि हटेकाे बताउनुभएकाे छ । बुधबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानले द्वन्द्वलाई थप चर्काउन नचाहेको बताउनुभयाे ।
इरान द्वन्द्वबाट हट्नु विश्वकै लागि खुसीको कुरा भएको पनि उहाँले बताउनुभएकाे छ । ‘इरानले यो द्वन्द्वलाई थप चर्काउन नचाहेको देखिन्छ’ राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभयाे, ‘यो विश्वकै लागि खुसीको कुरा हो ।’ शान्ति चाहनेहरूसँग अमेरिका शान्तिकै व्यवहार गर्न तयार भएको पनि बताउनु भएको छ ।
ट्रम्पले आफ्नो सम्बोधन गर्दै अमेरिकी सैनिकको मृत्यृ नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभएकाे छ । ‘आक्रमणमा कुनै पनि अमेरिकी सैनिक या इराकी सैनिक मारिएका छैनन् र कोही पनि घाइते भएका छैनन् । सैनिक अड्डामा सामान्य क्षति पुगेको छ ।’ राष्ट्रपति ट्रम्पले भन्नुभयाे ।
मिसाइल आक्रमणमा इरानले ८० भन्दा बढी अमेरिकी सैनिक मारिएको दाबी गर्दै आइरहेको थियो ।
राष्ट्रपति ट्रपले इरानी सैनिक कमान्डर सुलेमानी पहिले नै मारिनु पर्ने र अब इरान कुनै पनि किसिमको आतंकवादी गतिविधिमा संलग्न नहुन चेतावनी समेत दिनुभयो ।
अमेरिका विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली भएको तर यसको प्रयोग नगर्ने बताउनुभयो । ‘अमेरिका विश्वको सबैभन्दा ठूलो सैन्य शक्ति भएको राष्ट्र हो तर यसको मतलब हामी सैन्य शक्ति प्रयोग गर्दैनौँ । ‘
ट्रम्पले रुस, चीन लगायतका देशलाई इरानसँगको परमाणु सम्झौता समाप्त गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । इरानमाथि थप आर्थिक नाकाबन्दी लगाइने र इरानले आणविक कार्यक्रम तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने पनि ट्रम्पले बताउनुभयाे ।
ट्रम्पले अमेरिका तेलको नम्बर वान उत्पादक भएकाे र मध्यपूर्वमा तेल नचाहिने पनि बताउनुभयाे । ‘अमेरिका आफैमा विश्वको सबैभन्दा तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्रमा पर्छ । अमेरिका आर्थिक र सैन्य हिसाबले स्थिर छ ।’ उहाँले भन्नुभयाे ।
इरानका उच्च सैन्य कमाण्डर कासिम सुलेमानीको अमेरिकी हवाई आक्रमणमा मृत्यु भएपछि अमेरिका र इरानबीच द्वन्द चर्किएको थियो ।
अमेरिकाले सुलेमानी मारिदिएपछि इरानले त्यसको प्रतिशोधमा बुधबार इराकमा रहेका अमेरिकाका दुईवटा सैनिक क्याम्पमा १२ वटा भन्दा धेरै मिसाइल आक्रमण गरेको थियो ।
अमेरिका-इरान शत्रुता किन ? विश्वकै शक्तिशाली अमेरिकी सेनासँग जाेरी खाेज्ने इरान कति शक्तिशाली ?
अमेरिकी हवाइ आक्रमणमा इरानी विशेष सैन्य दस्ताका कमाण्डर मारिए
अमेरिका-इरान द्वन्द : इराकमा रहेका नेपाली शान्ति सेनालाई सतर्कता अपनाउन निर्देशन
आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडान असार २१ गतेसम्म रोक
access_time 8:54 pm
काठमाडौं, ३२ जेठ । कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडानलाई असार २१